रिडी हाइड्रोपावरले डाक्यो साधारणसभा, बुकक्लोज कहिले ? - Arthasansar
रिडी हाइड्रोपावरले डाक्यो साधारणसभा, बुकक्लोज कहिले ?
शुक्रबार, ०५ मंसिर २०७७, १२ : २३ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं - रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले १९ औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ ।
कम्पनीको मङ्सिर ४ गते बसेको संचालक समितिको निर्णयानुसार उक्त सभा मङ्सिर २६ गते शुक्रबार, कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय थापाथली, काठमाडौंमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संचालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरिनुका साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सहितको आषाढ ३०, २०७७ को वासलात, नाफानोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी स्वीकृत गरिनेछ ।
त्यसैगरी २०७७/७८ को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गरिनेछ ।
सभामा शेयरधनीहरुलाई २०७६/७७ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ०.२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै, सभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस शेयर स्वीकृत गरिनेछ ।
कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि मङ्सिर १५ गते सोमबार बुक क्लोज गर्दैछ । त्यसैले मङ्सिर १४ गते आइतबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयरधनीहरुले मात्र साधारणसभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।